Gadaa.com - Uummatni wal shakku fi wal hin amanne wajjin (waliin) deemee galii tokko ga’uu hin danda’u « Home
Posted: Sadaasa/November 13, 2010 · Gadaa.com Abdii Boruutiin*
9 Comments	Jaallataa Lammi:
November 14, 2010 @ 11:55 am
November 14, 2010 @ 1:59 pm
November 14, 2010 @ 6:18 pm
November 14, 2010 @ 9:52 pm
November 15, 2010 @ 8:46 am
November 15, 2010 @ 9:43 am
Hunda dura yaada dhiyeessitaniif hundi keessanuu galatoomaa. Yaaddni isin asitti dhiyeessitan jajjabeessaas ta’u; qeeqaas ta’u; dogoggora yaadaa qajeelchuufis ta’u; gorsaas ta’u; dhaamsa biraas ta’u; hundaa kabajaa fi walqixxummaa dhaan simachuun barbaada.
Balleessi guddaan kan hoggantoota qabsoo kanaa ta’u illee, jecha “uumatni” jedhu dhiisee “hoggantootni”…. jedhee mata duree barruu kanaa otuun akkanatti dhiyeesse, kuni dhugaa waliigalaa kana haphisa ykn dhiphisa. Mee fakkeenyaaf wal shakkuu fi wal amanuu dhabuun miseensota fi deeggartoota jidduu jira haa jennu; sababni kanaas waan fedhe haa ta’u; otuu wal shakkuun jiruu waliin hojjetanii, dhugaa dhaan waliin qabsaa’anii jaarmayaa kana cimsuu danda’uu? Ani akkan ofii kiyyaa yaadutti, waayeen akkanaa yoo uumame, jaarmayichi akka laafu godha; jabaatee kaayyoo tokko galii dhaan akka hin geenye gufuu itti ta’a jedheen yaada. Hogganni cimaan, haalli akkanaa akka hin uumamne godhuu danda’u illee, sababa fedheenis ta’u rakkoon akkanaa miseensota jidduutti yoo uumame, wal shakkuu kanaaf hogganaan kophaatti itti gaafatama waan qabu natti hin fakkaatu. Fakkeenya biraa kennuu dhaaf, hogganaan tokko balleessa guddaa hojjetee ykn dalagee dabre haa jennu; amma garuu kan dabre sana irraa baratee, gara fuulduraatti waan gaarii hojjechuu dhaaf murteeffatee kanaafis yoo of qopheesse; uummatni dur isa jaalachaa fi deeggaraa ture garuu yoo shakkii irratti uumee; amanuu dadhabee deeggaruus yoo dhiise, gara lachuufuu bu’aan hin argamu. Ilma namaa ta’ee addunyaa kanarratti kan balleessa hin hojjenne waan hin jirreef, kan balleessa dalagee dabre sanaafi illee carraa tokko kennuun waanuma jiru dha. Yoo balleessuma dabre sana irratti cichanii shakkii’umaan kan turan ta’e, waliin hojjechuun ykn waliin deemuun rakkisaa waan ta’uuf, galii tokkos akka waliin hin geenye gufuu ta’a. Hunduu galii barbaadame sanarraa turuu yookaanis hafuu danda’u jechuu dha. Akkuman kanaa olitti ibsuu yaale, wanti wal shakkii uumu rakkoolee hoggantoonni uuman irraayis haa dhufu; sababni kanaa illee waanuma fedhes haa ta’u; garuu yoo hawaasa keessatti yookaanis qabsoo kana keessatti uummata jidduutti shakkii fi wal amanuu dhabuun uumame, kan gaaga’amu uummatuma kana fi qabsoo bilisummaa isaa waan ta’uuf, haalli akkanaa akka hin uumamne; yoo uumamee jiraate illee, wal dandeettii dhaan obsaan akka furmaatni argamu hubachiisuuf jedhee; akka walii galaatitti dhiyeessuun barbaade. Uummata bal’aa Oromoo keessumaayuu kan biyya abbaa keenyaa keessa jirani; kan qawwee diinaatiin ukkaamamnii jiran; rakkoolee kana keessaa ba’uu dhaafis qabsoo hadhaawaa godhaa jiran; jidduu isaaniitti wal shakkii fi wal amanuu dhabuun jira jechuu kiyyaa miti. Jechi ani “uummata” jedhee walumaa galatti itti fayyadame kun akka dubbiin hin haphanneef malee uummata bal’aa Oromootti xiyyeeffachuu miti. Kun akka hundaafuu ifa ta’un barbaada. Galatoomaa.
November 15, 2010 @ 10:13 am
November 15, 2010 @ 10:14 pm
Garaagarumma ilaalcha kan fide akkataa ummata “define” gooneedha. Kanaaf, rakko hin qabu. Waanta guddaaan “content” barreefamedha. Jaalanuus jibinus, ummatas hoganootas yaa ta”u, shakkin wal irraa qabaannan kaayyoon hin milkaa’u akkuma ati jette. Waan hundumma dura, tumsaa keenyattu dursa. Addan hirmanee qabsoo ykn wal dhaansoo saboota biraa wajjiin gonnan numatu kufa. Tumsa jibbanis, wal shakanis, tumsi kan hin oolledha. Turu hin midhamna, alagaan nutti jabachaa adeemtti. Enna nutti asi wal dhaannu, wal dura dhaabannu, wal dhageefachuu jibbinu, dantaa ofii ariinu, algaan guyaa guyyaan nutti jabaachaa akka jirtu argaa jirra. Amma ta’e obsaan wal eegu garidha, sanaa achi, kan tumsa amanu waliin adeemu qaba. Humni sasaabamu qaba. Kan har’a waliin hojachuu jiibe, bilisummaa keenya osoo hin ta’iin maqaa qabsoon danta isaa gaaggessudha. Jaalanuus jibbinus, yeroo gabaaba keesatti tumsi yoo dhaabatu baate, loltuu kan jirtu akka nu harkaa facaatu beeka. Wal eegutti loltuu hamileen ishee cabee nu harkkaa amma bittinooftuttu turu hin qabu jechaa kooti. Kaayyon tokkummaa, kan bira hin dhufu. Isuma kaawwame sana walii galanii akkata achi geenyu mari’atani adeemudha. Ummatni Eritera, kutaa oromoyaa tokko jenne dubachuu dandeenya. Garu, dandeetti fi gara kuteenya qindeesani, har’a as gahan. Jabinni jiraannan, waan hin taane hin jiru.
November 15, 2010 @ 10:39 pm
Follow Gadaa.com in more than one way: Enter your search terms